ford - Synonyms of ford | Antonyms of ford | Definition of ford | Example of ford | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for ford
Top 30 analogous words or synonyms for ford
အယ်လ်ပီဂျီ (LPG) ရှိအားဖြင့် Citroen, Daewoo,Fiat, Ford, Hyundai, Opel,Vauxhall, Peugeot,
ရော်နယ် အိုဝင် ပဲရယ်လ်မန် ထပ်လောင်း၍ ပဲရယ်လ်မန် သည် Stand Up to Cancer, Pasadena, Calif စသည့် ကင်ဆာ သုတေသနနှင့် ကုသရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် ကင်ဆာလူနာများကို ကုသမှုအတွက် ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းထောက်ပံ့ပြီး နယူးရော့ခ်မြို့ရှိ World Trade Center ရန်ပုံငွေအတွက် ဒေါ်လာ ၅ သန်း၊ ဝါရှင်တန်ရှိ Ford ပြဇာတ်ရုံအတွက် ဒေါ်လာ ၂.၅ သန်းကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ပဲရယ်လ်မန် သည် ထိုလှူဒါန်းပေးအပ်မှုများ၏အသေးစိတ်ကို ဖော်ထုတ်ပြောဆိုရန် ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ရော်နယ် အိုဝင် ပဲရယ်လ်မန် သူသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် တိုင်းပြည်ထဲရှိ အခြားသော ဘဏ်အချို့မှ လွဲ၍ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုထဲဖြစ်သော ပထမဆုံးသော အမျိုးသားလုပ်ငန်း Ford Motor ကုမ္ပဏီကို ၆၆၄ မီလျံဒေါ်လာဖြင့် ဝယ်ယူပြီး ငွေစုငွေချေးလောကထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် သူ့အား အရေးမပါသောရာထူးပေးထားပြီး စီမံမှုကို ပေးအပ်ထားခဲ့သည့် Golden State Bancorp နှင့် စတော့အလဲအလှယ်ပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဟင်နရီ ဖို့ဒ် ဟင်နရီ ဖို့ဒ် (Henry Ford) သည် အမေရိကန် ဖို့ဒ် မော်တော်ကား ကုမ္ပဏီအား တည်ထောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည့်အပြင် မျက်မှောက်ခေတ် ကုန်ပစ္စည်းများ စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်ရာတွင် စွမ်းအားတိုးမြင့်ရေးအတွက် ပိုမိုလျင်မြန်သည့် စက်ပစ္စည်း စနစ်တကျ တပ်ဆင်မှု နည်းလမ်းကို (assembly line) စတင်အသုံးပြုခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဟင်နရီ ဖို့ဒ်အား မော်တော်ကား တီထွင်သူအဖြစ် မကြာခဏ ထင်မှတ်မှား တတ်ကြသည်။ သူသည် မော်တော်ကား လုပ်ငန်းကို တော်လှန်ပစ်သည့် တီထွင်အားကောင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။
Rockabilly Honky Tonk ပုံစံသည် အချစ်ကို ဆုံးရှုံးမှု၊ သားမယားဖောက်ပြန်မှု၊ အထီးကျန်မှု၊ အရက်စွဲခြင်းနှင့် သနားဂရုဏာသက်ခြင်းများနှင့်အတူ အလုပ်သမားလူတန်းစားဘဝကို တိမ်းညွတ်ထားသည်။ Delmore Brothers, the Maddox Brothers and Rose, Merle Travis, Hank Williams, Hank Snow နှင့် Tennessee Ernie Ford တို့၏ မှတ်တမ်းတင်သီချင်းများ လူသိများသည်။
ရော်နယ် အိုဝင် ပဲရယ်လ်မန် ပဲရယ်လ်မန် သည် ၂၀၀၈ တွင် အမှုအကြောင်းကြီးငယ်တို့အတွက် ဒေါ်လာသန်း ၆၃.၅ သန်း လှူဒါန်းခဲ့ ပြီး Cornell တက္ကသိုလ်၏ဆေးကောလိပ် Weill အတွက်ကား အကန့်အသတ်မရှိလှူဒါန်းသည်။ အခြား Stand Up to Cancer၊ World Trade Center ရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့် Ford ပြဇာတ်ရုံတို့တွင်လည်း အလှူငွေများပေးအပ်ခဲ့သေးသည်။ ပဲရယ်လ်မန် သည် နယူးရော့ခ်ရှိ ဆေးကောလိပ်ရှိ ရော်နယ် အို ပဲရယ်လ်မန် နှင့် ကလော်ဒီယာ ကိုဟန် မျိုးပွားစနစ်ကုသရေးစင်တာတွင် သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေးနှင့် လူနာပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး တို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဒေါ်လာ ၂၅ သန်း ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
ဝမ်းပိစ် ထိုနောက် သူတို့ ရဲ့ခရီးတစ်ဝက်ကိုရောက်ရှိပြီးနောက်ဆက်လက်၍ ကမ္ဘာသစ်အမည်ရှိသော နေရာသို့ ဆက်လက်ချီတက်ကြပြန်သည်။ ထို့သို့ချီတက်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ် အခြား ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကီဇာရု (Kizaru) ရဲ့နှိမ်နှင်းခြင်းကို ခံရသောကြောင့် ဆာပိုလီ ကျွန်းစုများ ( Sabaody Archipelago)မှ ကမ္ဘာတစ်ဖက်စီသို့တစ်သီးတစ်ခြားကွဲပြားသွားကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် လူဖီရဲ့သွေးသောက်ညီအကိုတစ်ဦးဖြစ်သည့် ပင်လယ်ဓါးပြထိပ်ခေါင် ရော်ဂျာရဲ့သားဖြစ်သော ပေါ်တိုဂတ်စ် ဒီ အေ့စ် (Portgas D. Ace ) ကိုသေမိန့်ချခဲ့သည်။ ထိုအမိန့်ကို ပင်လယ်ဓါးပြအချို့ကမကျေနပ်ကြ၍ အေစ့် ကိုကယ်ရန်ပြုလုပ်ရာမှ မရင်းဖို့ တိုက်ပွဲ (Marine Ford) တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ စစ်ပွဲကို ကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံးရေတပ်တိုက်ပွဲကြီးဟုပြောစမှတ်ပြုကြပြီး ထိုတိုက်ပွဲတွင် ပင်လယ်ဓါးပြဘုရင်လေးပါး (Four Emperor of Sea ) , (Yonuku) မှတစ်ဦးဖြစ်သည့် မုတ်ဆိတ်ဖြူ (whitebread) ကိုယ်တိုင်ဦးစီး၍ သူ့ရဲ့ မွေးစားသားလည်းဖြစ်သည့် အေ့စ်ကို ကယ်တင်ရန် စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုစစ်ပွဲကြောင့် မုတ်ဆိတ်ဖြူရော အေစ်ပါ ကျဆုံးခဲ့ပြီး လူဖီမှာလည်း ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် လူဖီသည် သူ၍ crew များနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ၎င်းတို့ရဲ့အစွမ်းအစ ခွန်အားများတိုးတက်လာစေရန် နှစ်နှစ်ခန့်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ အဲဒီလိုကွဲပြားနေတဲ့ (၂) နှစ်အတွင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ကူညီကြဖို့ အပြင်းအထန်ကို လေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရော်နယ် အိုဝင် ပဲရယ်လ်မန် အောက်တိုဘာလ ၂၉ တွင် ရက်ဗလွန်က လေ့လာမှုမျှော်လင့်ချက်များအတိုင်း သုံးချိုးရလဒ်ဖြင့် တင်ပြလာသည်။ တစ်နေ့တွင် ရက်ဗလွန် ရှယ်ယာသည် ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တက်လာသည်။ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် ၁၀ ဒေါ်လာဖြစ်လာသည်အထိ ထို့နောက်ပိုင်း သီတင်းပတ်များတွင် နှုန်းထားတက်လာခဲ့သည်။ ယနေ့အခါတွင် စတော့ကုန်သွယ်မှုသည် ၁၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ ပဲရယ်လ်မန် သည် အစပိုင်းတွင် ၁၉၈၈ ငွေစုငွေချေး အကျပ်အတည်းဖြစ်ချိန်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး Gerald J. Ford နှင့်အတူ ကြွေးမကျေသော လုပ်ငန်း ၅ ခုကို ၃၁၅ မီလျံဒေါ်လာဖြင့် ဝယ်ယူကာ ပထမဆုံးသော Gibraltar ဘဏ်ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ တွင် အမေရိကန်ဘဏ် လုပ်ငန်းတော်တော်များများကို ၁၁၀ မီလျံဒေါ်လာဖြင့် မရောင်းပစ်မှီ သူသည် ၁၉၉၀ တွင် နောက်ထပ် လုပ်ငန်း ၂ ခုကို ထပ်ထည့်ကာ ဘဏ်အချို့ကို အခွန်ရှောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ဗွီ-၁ ဗုံးပျံ The United States reverse-engineered the V-1 in 1944 from salvaged parts recovered in England during June. By 8 September, the first of thirteen complete prototype Republic-Ford JB-2 Loons, were assembled at Republic Aviation. The United States JB-2 was different from the German V-1 in only the smallest of dimensions. The wing span was only wider and the length was extended less than . The difference gave the JB-2 of wing area versus for the V-1.